ट्राउट हाइवे - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ श्रावण ७, बुधबार ०७:३२:००
नेपालमा जहाँजहाँ ट्राउट पालन गरिएको छ त्यहाँत्यहाँ रेष्टुराँ खुलेका छन् । ट्राउट उत्पादन गर्ने अग्रणी जिल्लाको सूचीमा कास्की, रसुवा, नुवाकोट, पर्वत, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुङ लगायत पर्छन् । चिसो पानीमा खेलिरहेका माछालाई ग्राहककै सामुन्ने जालमा थापेर पकाइन्छ ।
शहरिया रेष्टुराँको मेनुमा ट्राउटले प्रवेश पाएको पनि धेरै भैसक्यो । तिखा काँडा नहुने, खान पनि स्वादिलो भएकाले ट्राउट लोकप्रिय बन्यो । प्रोटिन र ओमेगा थ्रि तत्व प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले यसले शरीरको वृद्धि गराउँछ । त्यस्तै ओमेगा थ्रिले रक्तसंचार र मस्तिष्क विकासमा मद्दत गर्छ।
नेपालका ३० जिल्लामा ट्राउट माछापालन हुन्छ । सबैभन्दा धेरै माछाको खपत पासाङ ल्हामु राजमार्गमा हुन्छ । काठमाडौंको बालाजु बाइसपासबाट अघि बढेपछि जितपुरफेदीदेखि नै राजमार्ग छेउछाउमा ‘यहाँ जापानी रेन्बो ट्राउट पाइन्छ’ भन्ने व्यानर झुण्डाएका रेष्टुराँ छन् । त्यसैले यस राजमार्गलाई ‘ट्राउट हाइवे’ भनिन्छ ।
ट्राउट अमेरिकाको रैथाने माछा । नेपालमा जापानबाट ल्याइएकाले ‘जापानी रेन्बो ट्राउट’ । झलक्क हेर्दा इन्द्रेनी रंगको देखिन्छ । तर सबैतिरका माछा इन्द्रेनी रंगका हुँदैनन् । हिमालको जराबाट बगेर आएको पानीमा हुर्किएका माछा मात्र इन्द्रेनी रंगका हुन्छन् । खोलाको पानीमा पालिएका माछा काला हुन्छन् ।
नेपालमा डा. टेकबहादुर गुरुङले ट्राउट भित्र्याएका हुन् । उनले जापानबाट उपहारमा ल्याएका हुन् । उनी कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका कामु कार्यकारी निर्देशक पदबाट केही समय अघि रिटायर्ड भएका छन् ।
ट्राउटको रोचक कथा छ, गुरुङले सन् १९८८ मा जापानबाट ट्राउट ल्याएका । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष उनी मत्स्यपालन तालिम लिन जापान पुगेका थिए । त्यहाँ ९ महिना तालिम लिएपछि मियाजाकी प्रदेशका गर्भनरले उनलाई सोधेछन्, ‘मिस्टर टेकबहादुर तिमीलाई के उपहार दिउँ ?’
तुरुन्तै हाम्रा यी डाक्टरसाप्ले भनेछन्, ‘हामी नेपालीमा प्रोटिनको कमी छ। ट्राउट माछा लान पाए त्यसको पूर्ति हुन सक्थ्यो कि।’
उनी नेपाल फर्केपछि उताबाट भाले लागेको ५० हजार अण्डा आयो। मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पोखरामा काम गरिरहेका गुरुङ काजमा ललितपुरको गोदावरी आए र ती अण्डा कोरले । तिनै माछाको बंश यतिवेला नेपालमा चलिरहेको छ ।
आफैं दाना उत्पादन र हयाचरी निर्माणका काम पूरा गरेर मात्र निजी क्षेत्रलाई माछा पालन गर्न सन् १९९५ देखि दिइएको हो । त्यसपछि हामी सर्बसाधारणले ट्राउट माछा चाख्न पाएका हौं ।
धेरै वर्ष अघि राजा महेन्द्रको चाहनाअनुसार नेपालमा ट्राउट ल्याइएको थियो तर ज्ञान र प्रविधिको अभावमा ती माछा बाँचेनन् । नेपालमा बिस्तार भएको माछा गुरुङले उपहारमा ल्याएका माछाका पुस्ता हुन् । हाल नेपालमा वार्षिक ५ सय टन ट्राउट उत्पादन हुन्छ।
ट्राउट हाइवेमा यात्रा गर्दा साँझ बास बस्ने हो भने ककनी उपयुक्त हुन्छ । हिलस्टेशन ककनीबाट सूर्योदय, सूर्यास्त र हिमालको मनोरम दृश्य देखिन्छ ।
ककनी (२,१७३ मिटर)बाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, लमजुङ, बुद्ध, मनास्लु, हिमचुली, गणेश, लाङटाङ, दोर्जेलाक्पा, गौरीशंकर, सगरमाथा, ल्होत्से लगायत हिमालको लामो लर्कन देखिन्छ ।
डाँडामा अन्तराष्ट्रिय पर्वतारोही स्मृति उद्यान छ । त्यहाँ फ्रान्सेली नागरिक हेनरी सिगारेले १२ मिटर अग्लो रक क्लाइम्बिङ वाल बनाइदिएका छन् जहाँ चट्टान आरोहणको अभ्यास गरिन्छ ।
ककनीमै मेमोरियल पार्क पनि छ । सन् १९९२ मा थाई एयर दुर्घटना भएको ठाउँ त्यहाँबाट देखिन्छ । त्यतिबेला दिवंगत भएकाहरुको सम्झनामा पार्क बनाइएको हो ।
बौद्ध मन्त्र लेखिएका लुङदार, धज्र्यू लगायत ध्वजापताकाले डाँडै रंगीन देखिन्छ । ककनीमा बसन्ती दरबार पनि छ । डाँडामा होटल छन् । ट्राउट हाइवेको काउलेबजारबाट तीन किलोमिटरमा ककनी पुगिन्छ ।
सुझाब: ककनीमा रात बस्ने गरी जाँदा न्याना कपडा बोक्नु पर्छ किनकी डाँडामा वर्षैभरी जाडो हुन्छ है !
कसरी पुग्ने: काठमाडौंबाट ट्राउट हाइवे हुँदै ककनी २३ किमि । बालाजुको माछापोखरी हुँदै बाइपासबाट ककनी, नुवाकोट जाने बस छुट्छन् ।